Ilay Rakitsary Niparitaka Be Nampiseho Kashmiri Mpanao Hetsi-panoherana Nafatotra Amn’ny Jeep-n’ny Miaramila Indiana · Global Voices teny Malagasy
Ilay Rakitsary Niparitaka Be Nampiseho Kashmiri Mpanao Hetsi-panoherana Nafatotra Amn'ny Jeep-n'ny Miaramila Indiana
Voadika ny 20 Avrily 2017 3:33 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, বাংলা, Español, English
Sary avy amin'ny Twitter / Moonis Elahi
Niparitaka ireo pikantsary avy aminà lahatsarinà mpanohitra avy ao Kashmir mifatotra eo aminà fiaran'ny miaramila Indiana; anaovana azy ho “ampinga olombelona” manohitra ireo mpanao fihetsiketsehana mitora-bato.
Avy amin'ny fifidianana tamin'ny alàlan'ny latsabato vao haingana tany Srinagar, renivohitry ny fanjakana avaratr'i India ao Jammu sy Kashmir tamin'ny 9 Aprily ilay lahatsary. Nandritra ny fifidianana, mponin'i Kashmir maherin'ny valo no maty ary am-polony mahery no naratra nohony nitifiran'ny mpitandro filamiana Indiana ireo mpanao fihetsiketsehana. Nilaza ny governemanta Indiana fa miaramila am-polony no naratra vokatry ny tora-baton'ireo mpanao fihetsiketsehana.
Nanao ankivy ny fifidianana ireo mpanao fihetsiketsehana mpomba ny fahaleovantena ary mahery kelin'ny 7% amin'ny mpifidy 1,2 tapitrisa voasoratra anarana no nandray anjara tamin'ny fitsapankevitra tamin'ny alàlan'ny latsabato tany Kashmir. Ny fifidianana ho an'ny toerana banga ao amin'ny parlemanta Indiana ao Lok Sabha no nahitana ny taham-pahavitrihana ambany indrindra teo amin'ny tantaran'ny faritra.
Maherin'ny antsasaky ny iray tapitrisa amin'ny tafika Indiana no napetraka tao amin'ilay fanjakana farany avaratra indrindra ao India, Jammu sy Kashmir, izay mbola iray amin'ireo faritra ahitana miaramila be indrindra eto amin'izao tontolo izao. Maro amin'ireo mponona any Kashmir no mandà ny lalàna Indiana momba an'i Kashmir, ary niady ho an'ny fahaleovantena na ny fiombonana amin'i Pakistana hatramin'ny 1989.
Ara-jeografika dia voazara teo anelanelan'i India sy Pakistàna ilay faritra midadasika kokoa ao Kashmir rehefa samy lasa fanjakana izy roa tamin'ny 1947. Ao Kashmir ambany fifehezan'ny Indiana, izay misy hetsika nikotrika fahaleovantena nandritra ny taona maro, mihoatra ny 70.000 ny olona voalaza fa novonoin'ny mpitandro filaminana Indiana, tao anatin'ny tatitra momba ny fanitsakitsahana goavana ny zon'olombelona vitan'ny governemanta Indiana tamin'ny nampiasàny ny lalàna momba ny filaminambahoaka tamin'ny 1978 sy ny lalàna momba ny Hery Manokan'ny Tafika Mitàm-piadiana. Samy mandrafitra ny fototry ny maha-tsimatimanota ny tafika any amin'ny faritra izy roa ireo.
Nandritra ireo fifandonana vao haingana, dia tsapa tao amin'ny haino aman-jery sosialy ny hafanàn'ny herisetra .
Nozaraina im-betsaka tao amin'ny haino aman-jery sosialy ity lahatsary ity. Nisy feo re tao aoriana tao miantsoantso amin'ny teny Hindi “hizaka zavatra toy izao koa ireo mpitora-bato” tamin'ilay fiara nandalo teny amin'ny làlan'i Kashmir.
Avy eo nalain'ny mpanao politika toa an'i Omar Abdullah, Minisitra lehiben'ny faritra teo aloha ilay lahatsary. Nozarain'olona maro ny bitsik'i Abdullah ary niteraka hatezerana.
NAFATOTRA teo anoloan'ny jeep-n'ny miaramila ity tovolahy ity mba hahazoana antoka fa tsy hisy hitora-bato an'ilay jeep? Tena manafintohina fotsiny izao!!!! #Kashmir pic.twitter.com/bqs4YJOpJc
Fananiham-bohitry ny Indiana anaty sary tokana #Kashmir pic.twitter.com/zrCM6qPZbq
#Kashmir Inty Farooq Ahmad Dary avy any amin'ny vohitra Chill any Beerwah izay nafatotra tamin'ny tady ary nampiasain'ny tafika Indiana RR ho ampinga olombelona pic.twitter.com/psi40uCOJ0
Mahantra loatra ka tsy afaka hanao fitarainana ilay olombelona nataon'ny tafika Indiana fiarovana. Misy te hanampy azy ve? #kashmir https://t.co/rWWEedLEei
Voalaza fa nanao fanadihadiana ny zava-nitranga ny tafika Indiana. Na izany aza, hita miezaka manamarina ny hetsiky ny mpitandro filaminana ny ampahany amin'ny haino aman-jery Indiana sy ny Lehiben'ny Fampanoavana amin'ny filazàna fa ny fanaovana ny “ampinga olombelona” dia zava-baovao ary niaro ny ain'ny mpitandro ny filaminana. Ary nisy ihany koa ny fanamelohana ny hetsik'ireo mpomba ny fahalalahana. Misy maro no nivoaka ireo lahatsarin'ny mpanao hetsi-panoherana hafa namely ny mpitandro filaminana sy miantsoantso ny teny filamatra “Ndeha mandeha India, Mandehana miverina”.
Inty misy lahatsary iray hafa – lafiny hafa amin'ny adihevitra momba ny fifehezantena tao Kashmir. Tokony ho tezitra noho izany koa ve izahay? Tsia? Satria fihatsarambelatsihy ve? pic.twitter.com/UAOoAbVTA0
Izao no tsy maintsy atrehan'ny mpitandro filaminantsika any #Kashmir. Tsy hahita Liberaly maratra Fo hiresaka momba izany ianao >? pic.twitter.com/UAOoAbVTA0
Miradraraka ny vato. Izany no tsy maintsy iaretan'ny mpitandro filaminana any India saika isanandro any Kashmir. Jereo tsara. pic.twitter.com/QLbPo1JtQ5
Ilay mpitoraka bilaogy avy ao Kashmir Aarif Muzafar manondro ireo fanamelohana manavakavaka sy mifanntimpantina ataon'ny haino aman-jery Indiana amin'ny famaritana ny vaovao momba an'i Kashmir:
Andro vitsy lasa izay, niparitaka ny lahatsarin'ny ankizilahy iray avy any Kashmir manafika ireo lehilahy CRPF tany Budgam. Tao anatin'ny fotoana vitsy, nisy ‘fandaharana manokana’ natao hanamelohana ilay fanafihana, ary nanadinoana ireo olona valo vao avy maty novonoina
Hoy i Aarif manohy:
Niteraka adihevitra be ny mikasika ny fanontaniana hoe voamarina sa tsia ny fidarohana ireo lehilahin'ny CPRF. Mazava ho azy fa ny maha-olombelona dia tsy azo atao fanamby na oviana na oviana. Saingy ndeha holazaina ny marina momba ny fisian'ny India any Kashmir. Raha atomboko amin'ny tenako manokana, ​dia afaka mizara tantara hitako maso mivantana momba ny herisetra aho.
Nandritra ny fivoriambe fifidianana tao an-tanàna fotoana efa ela izany, nampiasain'ny tafika ho toy ny ampinga olombelona aho, ​​izay neken'izao tontolo izao ho heloka bevava an'ady. Nandositra niala ny tanàna ny raiko sy ny dadatoako nandritra ny alina mba hitsoaka ny filambaniny tsy nitsahatra, ary nandositra tany amin'ny toerana hafa koa ny zokiko lahimatoa. Izaho irery no hany ehilahy tao an-trano. Sivy taona na folo taona teo aho tamin'izany. Nentin'ny miaramila ho any aminà toerana mampiahiahy sy saropady aho ary navotsotra taorian'ny fikarohana naharitra ora iray. Nandritra ny kabariny tamin'ny andron'ny Fahaleovantena tamin'ny taona lasa, niaiky ny fampiasana ny ampinga olombelona tao Kashmir ny Praiminisitra Mehbooba Mufti.